ငါးဖမ်း Arcade ဂိမ်းအမြတ်အစွန်း Kylin မိုးကြိုး - အမြတ်အစွန်းငါးအားကစားပြိုင်ပွဲ. ဂိမ်းဆော့ဝဲလ်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပါ. အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဗီရို.
နေအိမ် » ထုတ်ကုန် » ငါးဖမ်း Arcade ဂိမ်းအမြတ်အစွန်း Kylin မိုးကြိုး
အမြတ်အစွန်း Fချစ်တယ် ကrcade ဂame High Holding နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
2 ~ 10 ကစားသမားဂိမ်းအဖြစ် configure လုပ်ပါ
အရည်အသွေးမြင့်မားသော 3D ဂရပ်ဖစ်များဖြင့်ငါးအက္ခရာများပါ ၀ င်သည်
ငါးဖမ်း Arcade ဂိမ်းအမြတ်အစွန်း Kylin မိုးကြိုးကစားနည်း
ဂိမ်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကစားသမားများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏သေနတ်များနှင့် ၄ င်း၏ဆက်တင်များကိုသုံးရန်သာဖြစ်သည်, အရှိန်မြှင့်ခြင်းနှင့်ပစ်မှတ်အတွက်ရည်ရွယ် - ဂိမ်း၏အချိန်ဘောင်အတွင်းတတ်နိုင်သမျှငါးများဖမ်းရန်.
In Fချစ်တယ် ကrcade ဂame အမြတ်အစွန်းခိုင်လင်းမိုးကြိုး ဖမ်းမိဖို့ကွဲပြားခြားနားသောငါးရှိပါတယ်, ကွဲပြားခြားနားသောအမှတ်တန်ဖိုးများကိုတန်ဖိုးရှိနေသောအားလုံးသော. ကစားသမားများသည်ကစားပွဲများအတွင်းဖမ်းမိသောငါးအရေအတွက်နှင့်တန်ဖိုးအားဖြင့်သူတို့၏အမှတ်ရမှတ်များကိုတိုးပွားစေသည်.
အဓိက အမြတ်အစွန်းခိုင်လင်းမိုးကြိုး ဂိမ်းကစားခြင်းသည်အင်္ဂါရပ်များ၊. ၎င်းတို့သည်ကစားသမားများကိုရမှတ်များပိုမိုရရှိရန်နှင့်အလှည့်ကျရရှိရန်ပိုမိုမြင့်မားသောအခွင့်အလမ်းပေးသောကြောင့်၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုရန်အရေးကြီးသည်, ပိုပြီးအနိုင်ရရှိဝင်ငွေအလားအလာ.
အင်္ဂါရပ်များ Fချစ်တယ် ကrcade ဂame အမြတ်အစွန်းခိုင်လင်းမိုးကြိုး ပါဝင်သည်:
1. Kylin – သူဌေး
ဘယ်အချိန်မှာ Kylin အောင်မြင်စွာနှိပ်ပါ, ၎င်းကိုဖမ်းရန်ကွင်းဆက်ကိုစွန့်ပစ်ပြီး Struggle Mode သို့ ၀ င်ရောက်လိမ့်မည်. ရုန်းကန်နေစဉ်အတွင်း, နဂါးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ထိခိုက်မှုတိုင်းကပိုများများကျလိမ့်မယ်. အကယ် Kylin ဖမ်းမိသည်က ပို၍ ပြင်းထန်သောတိုက်ခိုက်မှုကိုစတင်မည်ဖြစ်ပြီးကစားသမားသည်ပိုမိုမြင့်မားသောဆုကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်.
2. မိုးကြိုးပစ် - သူဌေးက
3. နတ်ဆိုးငါး - သူဌေးက
ဘယ်အချိန်မှာ နတ်ဆိုးငါး ဖမ်းမိသည်. ကစားသမားသည်ငါးများနိုင်သမျှများများဖမ်းရန်ကူညီလိမ့်မည်.
R ကို&: D အိုice
Fချစ်တယ် ကrcade ဂame စာရင်း
ထုပ်ပိုး & ပို့ခြင်း
ပို့ဆောင်ချိန် : 15~ ပင်လယ်မှတစ်ဆင့်ရက်ပေါင်း 20
E-mail ကို: angelo@gztimespace.com